Charles Njonjo, 100 taona, dia manenjika gorila an-tendrombohitra ao amin'ny Mt. Valan-javaboary Mgahinga
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Charles Njonjo, 100 taona, dia manenjika gorila an-tendrombohitra ao amin'ny Mt. Valan-javaboary Mgahinga
Fizahan-tany azo idirana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Kenya Breaking News • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda • Vaovao isan-karazany
Charles Njonjo, 100 taona, dia manara-maso gorila tendrombohitra ao amin'ny valan-javaboary Mt Mgahinga
Charles Mugane Njonjo, Attoney General taorian'ny fahaleovantenan'i Kenya notarihin'ny filoha Jomo Kenyatta, dia nahatratra zato tamin'ny 23 Janoary 2020.
Ho fahatsiarovana an'ity dingana lehibe ity dia nisafidy ny hankalaza azy io ilay centenarianina miaraka amin'ireo gorila an-tendrombohitra tandindonin-doza any an'ala Mt. Valan-javaboary Gorilla Mgahinga, any atsimo andrefana Oganda.
Niaraka tamin'ny fianakaviany, Njonjo dia nitaingina helikoptera ho an'ny traikefa 'tsy maintsy atao alohan'ny hahafatesanao' amin'ny lisitry ny siny 'rehetra'.
Mba hahafahana manara-dalàna, Njonjo dia nentina tamin'ny seza sedan antsoina hoe 'helikoptera' natao manokana ho an'ireo mpanaraka kilemaina, maratra na antitra. Ny sedan dia mitentina 300 dolara amerikana hanakaramana ary misy ekipa misy mpiandry vavahady valo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo izay mifandimby mitondra 'trackers'. Izy io dia miaraka amina fehikibo fipetrahana ary seza fiara ho fampiononana fanampiny.
Tsy maintsy natakalon'i Njonjo ny palitao mainty marika misy azy, famantaranandro rojo volamena ary satroka bowler izay nahazoany ny anaram-bosotra hoe "Duke of Kabeteshire" ho an'ny jeans sy mpanazatra mikitoantoana kokoa
“Tany amin'ny King's College Budo aho ary nandeha tany niaraka tamin'i King Freddie (Kabaka Edward Mutesa II an'ny fanjakana Buganda). Tena tiako i Oganda sy izay azoko taminao. Soa ihany aho fa nahita gorila, tanora roa ary lahy lehibe roa, ”hoy i Njonjo taorian'ny nanolorana azy mari-pankasitrahana momba ny fanarahan-dia an'i Gorillas tao amin'ny valan-javaboary Mgahinga Gorilla.
Njonjo, mpisolovava britanika voaofana dia iray amin'ireo olom-pirenena nanan-karena sy nanankarena indrindra tao Kenya, niaraka tamin'ny fahaizany tamim-pahamendrehana, izay fantatra fa nanao tsiambaratelo nifanaovana tamin'ny governemanta israeliana namela ny Commandoe israeliana hidina tao Kenya nandritra ny krizy takalon'aina 1976 tao Entebbe.
Manambady an'i Margaret Bryson izy ary miaraka, manan-janaka efatra izy ireo ary matihanina avokoa.
Nidina izy satria ilay lehilahy tranainy indrindra fantatra fa nanara-dia ireo gorila tendrombohitra, zava-bita izay tokony hidina ao amin'ny Guinness Book of World Records.
Momba ny valan-javaboary
Ny valan-javaboary Mgahinga Gorilla dia mipetraka eo ambonin'ny rahona, amin'ny haavony eo anelanelan'ny 2,227m sy 4,127m. Araka ny lazain'ny anarany dia noforonina izy io mba hiarovana ireo gorila tendrombohitra tsy fahita firy izay monina amin'ny ala mikitroka, ary toeram-ponenana manan-danja ihany koa ho an'ny gidro volamena tandindomin-doza.
Ary koa manan-danja amin'ny fiainana dia, ny valan-javaboary koa dia manana dikany ara-kolontsaina lehibe, indrindra ho an'ireo pygmies teratany Batwa. Ity foko mpihaza mpihaza ity dia "olona voalohany" an'ala, ary ny fahalalany taloha ny zava-miafina azy dia tsy manam-paharoa.
Ny endrika mampitolagaga an'i Mgahinga dia ireo volkano telo misy kônity sy manjavona, ampahany amin'ny faritra Virunga Range izay mahavariana manamorona ny faritanin'i Oganda, Kongo ary Rwanda. Mgahinga dia ampahany amin'ny velaran-tany Virunga Conservation Area izay lehibe kokoa izay ahitana zaridaina mifanila amin'ireo firenena ireo. Ny tehezan'ireo volkano dia mirakitra tontolo iainana isan-karazany ary samy hafa biolojika, ary ny tendrony dia manome backdrop mahavariana an'ity toerana kanto ity.